Ku dar appka iyo xakameynta codka albaabkaaga garaashka loogu talagalay 48 $ oo leh iibintan hal maalin ah ee Amazon - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Ku dar appka iyo xakameynta codka albaabkaaga garaashka loogu talagalay 48 $ oo leh iibintan hal maalin ah ee Amazon - BGR
Qalabka guriga caqliga leh ayaa ah mid aad u fiican, laakiin qaarkood ayaa waxtar badan marka loo eego kuwa kale. Miyaad runtii u baahan tahay qaboojiye caqli badan oo leh shaashad taabashada weyn? Ma hubno sidaas ... laakiin waxaan hubnaa inaad jeclaan doontid caqliga caqliga leh ee aan ku tusin doono. Amazon waxay abaabushaa iib geerida dilaaga ah maalin uun albaabka garaashka Meross Smart . Aad bay u fududahay in la rakibo, waxayna kudartaa xakameynta codsiga iyo xitaa xakameynta codka albaabka garaashkaaga. Taasi waa sax, waad u sheegi kartaa Alexa ama Kaaliyaha Google inuu garaashkaaga furo! Waxaa caadi ahaan loo iibiyaa $ 73, laakiin waxaa lagu iibiyaa kaliya $ 47,99. In gabi ahaanba la xaqiijiyo!
Noqo mid xariif ah: caqli yeelo albaabka garaashkaaga hada jira. Kontoroolka fog iyo xakameynta codka, si fudud adoo riixaya meross / 'mɪrɚs / app meelkasta ama adoo la hadlaya aaladdaada ama aaladdaada Google. Si loogu oggolaado in reerkaaga, martidaada ama warqadahaaga ay ka gudbaan albaabka garaashka inta aad karineysid ama aadan guriga joogin. Majiro ajuurada bil kasta ama ajuurada kale ee isdiiwaangalinta! Fadlan hoos u dhaadhac oo calaamee "Sanduuqa Farsamooyinka - Tilmaanta Isticmaalaha" ee adeegsiga ugu dambeeya ee amarrada codka.
Hubinta Dardar-gelinta: U gudub liiska oo calaamadee sanduuqa "Faahfaahinta Farsamo - Tilmaanta Codsashada" si aad u aragto in nooca geerashkaaga uu horumaro. liiska iswaafajinta Ama ka eeg liiska iswaafajinta bogga 'm'rɚs / web rasmi ah. Haddii "tijaabada tijaabada ah ee gaaban" ay ku guuldareysato, laakiin furitaanka garaashkaaga wuxuu ka yimaadaa Chamberlain / liftMaster / Craftman. Fadlan noo soo dir midabka badhanka barashada ee furitaanka garaashkaaga, waan ku rarri karnaa alaabada kugu habboon adiga oo adeegsanaya 'MSG100', ka dhig mid shaqeynaya.
Habab badan oo ogeysiin ah: Feejignow dariiqyada ogeysiinta ee kaladuwan sida furitaanka / xirida xaaladda garaashka, ogeysiinta saacadaha shaqada dheer, iyo ogeysiinta habeenka si lagu xasuusiyo inaad xirto albaabka garaashka. Waxaadna ka hubin kartaa diiwaanka hawlgalka furitaanka / xiritaanka garaashka ee barnaamijka APP.
Si sax ah oo deggan oo deggan: waxay la socotaa dareemayaal sare oo dareensan oo si dheellitiran u kormeera xaaladda gobolka albaabka garaashka oo calaamaddu ay xasilloon tahay. Iyada oo leh adapter loo beddelay 110V oo loo beddelay 5V, aamin badan.
Hel kamarad laba jibbaarane ah 200 $ illaa 140 $ oo leh kuubankan qaaska ah - BGR